Kaniisadda Muujintii 12, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Bilowga Cutubka 12aad ee Muujintii, Yooxanaa wuxuu ka waramayaa aragtidiisa ku saabsan haweeney uur leh oo dhowaan dhalan doonta. Wuxuu arkay iyada oo quruxsan quruxsan oo qorrax iyo dayax leh ayaa cagihiisa hoostooda ku jirta. Madaxiisa waxaa saaran taaj ama taaj laba iyo toban xiddigood ah. Yay tahay naagta iyo ilmuhu u gudbinayaan?
Bilowgii 1 waxaan kahelay sheekada aabihii Kitaabka Quduuska ah ee Yuusuf, oo riyo ku lahaa kaas oo isaga loogu muujiyey goob muuqaal ah. Ka dib wuxuu walaalihiis u sheegay inuu arkay qorraxdii, dayaxii, iyo koob iyo toban xiddigood oo isaga u sujuuday (Bilowgii 1:37,9).
Sawiradii riyada Yuusuf si cad ayuu ula xiriiray xubnaha qoyskiisa. Wuxuu ahaa Yuusuf aabbihiis Israa'iil (Sun), hooyadiis Rachel (Dayax) iyo kow iyo toban walaalihiis ah (Xiddigaha, eeg Bilowgii 1:37,10). Xaaladdan oo kale, Yuusuf wuxuu ahaa walaalkii laba iyo tobnaad ama "xiddig". Laba iyo tobanka reer binu Israa'iil waxay noqdeen qabiilooyin tiro badan waxayna ku koreen quruun noqotay dadkii Ilaah doortay (Deut 5).
Muujintii 12aad ayaa si wax ku ool ah u beddeleysa waxyaabihii riyada Yuusuf. Isaga ayaa dib u turjumaya iyaga oo tixraacaya reer binu Israa'iil ruuxiga ah - kaniisadda ama ururka dadka Ilaah (Galatiya 6,16).
Muujintii, laba-iyo-tobanka qolo ayaan tixraacin Israa'iil qadiimka ah, laakiin waxay astaan ​​u yihiin kiniisadda oo dhan (7,1-8). Naagtii oo qorraxda xidhatay ayaa kaniisadda u muujin karta sida aroosadda ifaya ee Masiixa (2 Korintos 11,2). Dayaxa oo ka hooseeya cagaha dumarka iyo taajka madaxdeeda ayaa astaan ​​u noqon karta guushii Masiixa.
Marka loo eego astaantan, “haweeneyda” Muujintii 12 waxay wakiil ka tahay kaniisadda Ilaah ee daahirka ah. Masiixu wuxuu soo saaraa " (Tarjumaad: Tafsiirka Baybalka ee Waxbarista iyo Wacyigelinta, "Muujintii", bogga 152).
Axdiga Cusub dhexdiisa, kaniisadda waxaa lagu yaqaan Israa'il ruuxiga ah, Siyoon iyo "hooyada" (Galatiya 4,26; 6,16; Efesos 5,23-24; 30-32; Cibraaniyada 12,22). Siyoon-Yeruusaalem waxay ahayd hooyada loo maleegayo reer binu Israa'iil (Ishacyaah 54,1). Muunad ahaan waxaa loo qaaday Axdiga Cusub lagana dalbaday kaniisadda (Galatiya 4,26).
Falanqeeyayaasha qaar ayaa u arka calaamadaha haweeneyda Muujintii 12,1: 3 inay ballaaran tahay. Sawirku, waxay yiraahdaan, waa dib u fasiraadda diimaha Yuhuudda ee ku saabsan Masiixa iyo khuraafaadka jaahilka ah ee madax furashada iyadoo la tixraacayo waayo-aragnimada Masiixa. M. Eugene Boring wuxuu yiri: “Naagta ma aha Maryan ama Israa'iil ama kaniisadda, laakiin waa in ka yar oo ka badan dhammaantood. Sawirada uu Yooxanaa adeegsaday waxay isu keeneen dhowr waxyaabood: sawirka khuraafaadka jaahilka ah ee boqoradda jannada; sheekada ku saabsan Xaawa, oo ah hooyada inta nool oo dhan, lagana bilaabo buugga koowaad ee Muuse, kaas oo 'farac' burburiyey abeesadii ugu wanaagsanayd (Bilowgii 1: 3,1-6); Reer binu Israa'iil oo bahalkii / Fircoon uga baxsaday cidlada baalal gorgor (Baxniintii 2: 19,4; Sabuurradii 74,12: 15); Siyoon oo ah hooyada dadka Ilaah da 'kasta ha ahaato, reer binu Israa'iil iyo kaniisadda ” (P. 152).
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, qaar ka mid ah turjubaannada Kitaabka Quduuska ah ayaa u arka tixraacyo khuraafaadyo jinniyo kala duwan iyo sidoo kale sheekada riyadii Yuusuf ee Axdiga Hore. Khuraafaadka Griiga, ilaahaga uur leh ee Leto waxaa silcin kara bawdada bahalku. Waxay u baxsatay jasiirad ay ku dhashay Apollo, oo markii dambe dilaya masduulaagii. Ku dhawaad ​​dhaqan kasta oo reer Mediterranean ah ayaa leh nooc ka mid ah dagaalkan khuraafaadka ah kaas oo daanyeerka u weerara horyaalnimada.
Sawirka muujinta ee haweeneyda cosmic waxay ku tilmaamtay dhammaan khuraafaaddan inay been yihiin. Waxay sheegaysaa in sheekooyinkaas midkoodna uusan fahmin inuu Ciise yahay Bixiyaha iyo in Kaniisaddu ay tahay dadka Ilaah. Masiixu waa wiilka dila masduulaaga, maahan Apollo. Kaniisaddu waa hooyada iyo kan Masiixu ugu yimaado; Leto ma aha hooyada. Ilaahadda Rome - shakhsiyadda Boqortooyada Roomaanka - dhab ahaantii waa nooc ka mid ah dhillada ruuxiga ah ee caalamiga ah, Baabuloontii Weyn. Boqoradda runta ah ee jannada waa Siyoon, oo ka kooban kaniisadda ama dadka Ilaah.
Markaa, muujinta sheekada haweenku waxay soo bandhigaysaa siyaasad hore iyo diimeed oo la aaminsan yahay. Aqoonyahan Ingiriis ah oo reer Ingiriis ah GR Beasley-Murray ayaa leh in John adeegsiga khuraafaadka Apollo "uu yahay tusaale cajiib ah oo ku saabsan xidhiidhka masiixiga iyada oo loo marayo astaan ​​caalami ah oo loo yaqaan" (Tafsiirka Kitaabka Quduuska ah ee Qarniga Cusub, "Muujintii," bogga 192).
Muujintii sidoo kale waxay matalaysaa Ciise inuu yahay Bixiyaha kaniisadda - Masiixa oo muddo dheer la sugayay. Sidan, buugga ayaa ugu dambeyntii dib ugu turjumaya macnaha astaamaha Axdiga Hore. BR Beasley-Murray wuxuu faallo ka bixinayaa: “Isaga oo adeegsanaya qaabkan muujinta, John wuxuu hal mar ku dhuftay sheegashada dhammaystirka rajadii jaahilka iyo ballankii Axdiga Hore ee Masiixa ee Injiilka. Badbaadiye kale ma jiro Ciise mooyee (P. 196).
Muujintii 12 sidoo kale waxay shaaca ka qaadaysaa cadowga ugu weyn ee kaniisada. Isagu waa masduulaagii guduudanaa ee cabsida badneyd oo leh toddobo madax, toban gees iyo toddoba taaj madaxiisa. Muujintii ayaa si cad u tilmaamaysa masduulaagii ama bahalkii - waa "abeeso duug ah oo la yiraahdo Ibliis ama Shaydaan oo adduunka oo dhan sasabaya" (12,9 iyo 20,2).
Wakiilka Shaydaanka ee dunida - bahalku wuxuu ka socda badda - wuxuu kaloo leeyahay todoba madax iyo toban gees iyo sidoo kale waa midab guduudan (13,1 iyo 17,3). Dabeecada Shaydaanka ayaa ka muuqata wakiilkiisa dhulka. Masduulaagii wuxuu isu yeeli karaa shar. Sababtoo ah khuraafaadka qadiimiga ah waxay lahaayeen tixraacyo badan oo jiidaya, dhagaystayaasha John waxay ogaan lahaayeen in masduulaagii Muujintii 13 uu ahaa cadawga cosmic.
Waxa toddobada madax ah ay masduulayaan isla markiiba ma cadda. Si kastaba ha noqotee, maadaama Yooxanaa uu u adeegsanayo lambarka toddobada astaan ​​dhammaystiran, tani waxay muujin kartaa dabeecadda caalamiga ah ee awoodda shaydaanka iyo inuu si buuxda isagu sharraxayo oo dhan. Oo masduulaagii wuxuu kaloo leeyahay toddoba tiaras ama taaj madax ah madaxyadiisa. Waxay matali karaan sheegashada shaydaanka ee xaqdaarada ah ee ka dhanka ah Masiixa. Sida Sayidyada Sayidka, dhammaan taajkii xukunka oo dhan waxaa leh Ciise. Waa isaga oo taajka loo caleemo saari doono (19,12.16).
Waxaan baranay in masduulaagii "odaygii seddexaad ee xiddiggii cirka duulay oo dhulka ku tuuray" (12,4). Jajabka waxaa loo adeegsaday dhowr jeer buugga Muujintii. Waxaa laga yaabaa inaan u fahamno oraahdan inay tahay tiro yar oo muhiim ah.
Waxaan sidoo kale helnaa taariikh nololeed gaaban oo ah "wiilka" haweeneyda, tixraac Ciise (12,5). Muujintii halkan waxay ka sheegaysaa sheekada dhacdada Masiixa waxayna tilmaamaysaa iskuday aan lagu guuleysan ee Shaydaanka si loogu carqaladeeyo qorshaha Ilaah.
Oo masduulaagii wuxuu isku dayay inuu dilo ama "cuno" cunugga ilmaha markii ay dhashay. Tani waxay tilmaan u tahay xaalad taariikhi ah. Markuu Herodos maqlay in Masiixa Yahuudiya ku dhashay Beytlaxam, wuxuu wada laayay dhammaan carruurta yaryar ee magaalada ku nool, taas oo dhalineysa dhimashada ilmaha Ciise. (Matayos 2,16). Dabcan, Ciise wuxuu u baxsaday Masar isaga iyo waalidkiis. Muujintii waxay inoo sheegaysaa in Shaydaanka runtii uu ka dambeeyay isku daygii lagu dili lahaa Ciise - inuu "cuno".
Faallooyinka qaar ayaa rumeysan in isku dayga shaydaanka ee ah inuu "cuno" cunugga gabadha sidoo kale inuu yahay jirkiisa Ciise (Matayos 4,1: 11), oo daboolaya farriinta injiilka (Matayos 13,39) oo ku kicinaya inuu iskutallaabta ku qodbo Masiixa (Yooxanaa 13,2). Isaga oo dilaya Ciise iskutallaabta dusheeda, Ibliisku wuxuu u maleynayay inuu ku guuleystey Masiixa. Dhab ahaantii, waxay ahayd dhimashadii Ciise qudhiisa oo dunida badbaadiyey oo shaabadeeyey masiirka Ibliiska (Yooxanaa 12,31; 14,30; 16,11; Kolosay 2,15; Cibraaniyada 2,14).
Dhimashadiisa iyo sarakicistiisa, Ciise, ilmaha haweenka ah “waxaa kor loogu qaaday xagga Ilaah iyo carshigiisa" (12,5). Taasi micnaheedu waa, in loo sara kiciyay dhimasho la'aan. Ilaah wuxuu kor u qaadey Masiixa sharafta leh jagada maamulka guud (Filiboy 2,9-11). Waxaa loogu talagalay "inay ku daaqaan dadka oo dhan bir bir ah" (12,5). Oo wuxuu ku daaqi doonaa dadyowga xagga jacaylka iyo amar weyn. Ereyadan - "dadyowga oo dhami way xukumaan" - waxay si cad u muujinayaan magaca calaamadda ilmuhu u jeeddo. Isagu waa Masiixa subkan ee Ilaah, oo loo doortay inuu dunida oo dhan xukumo boqortooyada Ilaah (Sabuurradii 2,9; Muujintii 19,15).